Amayunithi wesilinganiso waseJalimane namayunithi wesisindo aseJalimane
Sidinga isilinganiso namayunithi wesisindo ngawo wonke umzuzu wempilo yethu. Ukwazi ukuthi yiziphi lezi zingxenye ngolimi lwethu nokuthi zenzani kuzosisiza sifunde okulingana nesiJalimane. Ngale ndaba esizoyifunda kulesi sifundo Amayunithi wezinyathelo nezisindo zaseJalimane futhi ekugcineni kwesifundo uzofunda ukuthi ungazisebenzisa kanjani lezi zingxenye ngenkathi ukhuluma noma ubhala ngesiJalimane.
Amayunithi Wokulinganisa Nesisindo saseJalimane
Amayunithi wezinyathelo nezisindo zaseJalimane Njengoba sicabanga ukuthi izokuheha ngenkathi uhlola itafula, singathanda ukuveza ukuthi amaJalimane kanye namaTurkey amayunithi amaningi ayafana ngokuqondene nokupela nokubiza amagama. Le mininingwane ivame ukusebenza kumayunithi wokulinganisa isisindo, kepha kufanele kukhunjulwe ukuthi kukhona okuhlukile. Njengoba ulimi lwethu nezinye izilimi eziningi kungathatha amagama kusuka komunye nomunye, lokhu kufana kungokwemvelo impela. Sicabanga ukuthi kuzoba lula kakhulu ukukugcina engqondweni ngoba ziyefana.
Amayunithi wezinyathelo nezisindo zaseJalimane Sizokwenza itafula ngokubheka amayunithi wesilinganiso nesisindo njengezihloko ezihlukile ukuze ukwazi ukugcina izinkulumo engqondweni yakho ngenkathi ucubungula isihloko.
Amayunithi Wokulinganisa WaseJalimane akhombisa ubude, indawo nebanga
1 Imitha → 1 Imitha (m)
Isentimitha eli-1 → I-Zentimeter engu-1 (cm)
Imilimitha eyi-1 → 1 millimeter (mm)
Idesimitha elilodwa → 1 udizimitha (dm)
I-1 Mileage → Ikhilomitha eli-1 (km)
1 imitha eyisikwele → 1 Isikwelemitha
Ikhilomitha eli-1 lesikwele → 1 Quadratkilometer
1 decare / acre → 1 Ihektare
1 Unyawo → 1 Ukuxabana
1 iMil → 1 IMeile
1 Inch → 1 zoo
Amayunithi Wokulinganisa WaseJalimane Abonisa Isisindo Nengxenye
1 ikhilogremu → 1 Amakhilogremu (kg)
1/2 IKilo / Ingxenye yeKilo → 1 Imali (Ib)
I-Gram ye-1 → 1 amagremu
1 milligram → 1 iMilligram (mg)
50 ikhilogremu → 1 iZentner (ztr.)
1 Ton → 1 Tonne (isib)
I-1 Liter → Ilitha elilodwa (L)
1 Isentilitha → 1 I-Zentiliter (cl)
1 isigidigidi → Imililitha engu-1 (ml)
1 IGallon (4,5 Liter) → 1 IGallone (gal)
Imitha eyi-Cubic → 1 Cubicmeter (m3)
1 Ucezu → Isiqeshana se-1
1 Piece / Piece → Isiqeshana se-1
Iphakheji engu-1 → Iphakethe eli-1
Ibhokisi eli-1 → Umthamo 1
1 Isaka → 1 Isaka
1 ingxenye → Ingxenye 1
1 Indebe → 1 bhera
1 inkomishi yengilazi → 1 ingilazi
I-1 kabili → 1 pair
Ishumi nambili → 1 Dutzen
Bangani abathandekayo, sithanda ukunazisa ngokunye okuqukethwe kusayithi lethu, ngaphandle kwesihloko osifundile, kukhona nezihloko ezinjengalezi ezilandelayo engosini yethu, futhi lezi izihloko okufanele abafundi baseJalimane bazi.
Siyabonga ngentshisekelo yakho kusayithi lethu, sikufisela impumelelo ezifundweni zakho zaseJalimane.
Uma kunesihloko ofuna ukusibona kusayithi lethu, ungasibikela sona ngokubhalela isithangami.
Ngendlela efanayo, ungabhala noma yimiphi eminye imibuzo, imibono, iziphakamiso nazo zonke izinhlobo zokugxekwa mayelana nendlela yethu yokufundisa isiJalimane, izifundo zethu zaseJalimane kanye newebhusayithi yethu.
# Amayunithi Wokulinganisa Nesisindo saseJalimane
# Amayunithi Wokulinganisa WaseJalimane akhombisa ubude, indawo nebanga
# Amayunithi Wokulinganisa WaseJalimane Abonisa Isisindo Nengxenye
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Le ndatshana oyifundayo yaqala ukubhalwa cishe ezinyangeni eziyi-10 ezedlule, ngoFebhuwari 11, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoMashi 20, 2021.
Izandiso ZaseJalimane Zesizathu (Kausaladverbien)
Izandiso ZaseJalimane Zendawo (Lokaladverbien)
Iziphikiso zaseJalimane, iziphikiso zaseJalimane, izincazelo eziphikisanayo
Isibonelo se-A2 ye-German Letter
Ukuhlangana kwesenzi seSprechen
Ukuhlanganiswa kwesenzi seHören
Izinto zemisho ngesiJalimane